Telehealth - Xarunta Daryeelka Caafimaadka ee Kaniisadda Falls
Hore ma loo qabtay ballantaada?
Miyaad horey u qorsheysay ballantaada qof ahaaneed? Weli waad ballansan kartaa ballan Telehealth - taas oo kuu oggolaan doonta inaad kala hadasho ilmo iska soo rididdaada mid ka mid ah barayaashayada bukaanka ka hor ballantaada oo ah fiidyow ama taleefan. Fadlan email noogu soo dir womenfirst@fallschurchhealthcare.com oo noo soo sheeg inaad jeceshahay inaad jadwal u sameysatid Telehealth.
WAR CULUS! Bukaannadeennu hadda waxay ku dhammaysan karaan casharradooda waxbarashada bukaanka illaa kan cusub Sug Telehealth (ballan ballaadhan oo fiidiyoow ama shir maqal ah). Telehealth waxay ka dhigeysaa daryeelkaaga caafimaad mid la awoodi karo oo raaxo leh, waxay kaa baabiinaysaa inaad ku dhammaystirto waraaqahaaga xafiiska dhexdiisa, waxayna gaabinaysaa waqtigaaga xafiiska.
Foomka Ballanta ee Codsiga, fadlan ballanta ballanta taleefankaaga ugu yaraan 1-2 maalmood kahor ee maalinta aad rabto inaad u timaaddo ballantaada daryeelka daryeelka ilmo soo rididda ee qof ahaan ah. Waxaad ka heli doontaa dhammaan foomamka macluumaadka bukaankaaga khadka tooska ah inaad buuxiso ka hor ballantaada Telehealth. Inta lagu jiro ballantaada Telehealth waxaad kula hadli doontaa barahaaga bukaanka khadka tooska ah si dib loogu eego taariikhdaada caafimaad iyo inaad waxbadan ka barato xulashada aad dooratay.
Waxaan kugu dhiirigelinaynaa inaad isticmaasho barnaamijkeenna fiidiyowga, sacdiyo.me, kulankaaga Telehealth. Fadlan sheeg haddii aad jeclaan lahayd inaad fadhigaaga Telehealth u wacdo taleefan ahaan.
Su'aalaha Badanaa La Is Weydiiyo ee Ku Saabsan Caafimaadka